Laga yaabaa 23, 2018 admin
lagu kala gato saamiyada Jarmal u aragtaa bilaabay waxyaabaha Seeraar
Jarmal Boerse, Milkiilaha of Stock Exchange Frankfurt ah, waxaa ka baaraan degeysa inay waxyaabaha cryptocurrency, sida lagu sheegay warbixin.
Isagoo ka hadlayay xaflad warshadaha ah ee London on Wednesday, Jeffrey Tessler, madaxa adag ee macaamiisha, alaabta iyo suuqyada muhiimka ah ayaa sheegay in:
“Waxaan nahay qoto dheer ee la shaqo.”
Maraykanka oo bilawday baaritaan ku salaysayn khalkhalgelinta sharci darro qiimaha Seeraar
Waaxda Caddaaladda ayaa furay baaritaan lagu ganacsiga sharci darrada ah, si gaar ah in ganacsatada ay yihiin dambi mafaahiim qiimaha Seeraar, sida ay afar qof aqoon u leh arrinta.
xeer Federaalka la Commission Trading Badeecadda Futures shaqada, jaangooyaha dhaqaale in uu kormeero taagayo xidhan Seeraar.
Xeeladaha sharci darrada ah in Waaxda Caddaaladda waxaa diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah buufinta iyo ganacsiga dhaqmo, kuwaas oo ah ku dhaqanka sharci-darro ah in saamayn ku yeelan karaan qiimaha. In buufinta, ganacsade ah oo Wajigiisa amar ka dibna iyaga cancels mar qiimaha dhaqaaqo jihada a doonayo.
Wash Xirfado lug ganacsiga cheater ah ay is in la siiyo aragti been ah oo ah dalabka suuqa in dhiman kale si ay quusin in aad.
Kuwani waa noocyada khiyaameeyay in xakameeya ayaa sano ku qaatay isku dayaya in ay saari mustaqbalka iyo equities suuqyada.
bangiga Thai ayaa dhameystiraya macaamil ganacsi caalami ah oo isticmaalaya blockchain
bangiga Krungsri Thailand ayaa si guul leh sameeyay a macaamil xuduudka isaga gudba “in xoogaa ilbiriqsiyo ah” Bangi ee Singapore isticmaalaya blockchain a.
Isticmaalka technology this mustaqbalka ogolaan doonaa bangiga Singapore ah, Mitsubishi, iyo shirkadaha ineey kale si “sii hagaajin lahaa wax ku oolnimada maamulka hantidooda iyo yareeyaan kharashka” bangiga ayaa sheegay in.
fund deyr crypto First bilaabay in Australia
Australia ee Capital kasta ayaa fund deyr cryptocurrency-diiradda ugu horeysay ee dalka ee maalgashadayaasha tafaariiqda.
Tom Surman, co-aasaasaha iyo agaasimaha shirkadda fadhigeedu yahay Australia maamulka maalgashi, ayaa sheegay in:
“Waxaan nahay kuwa kibirka leh in ay mid ka mid ah lacagaha tafaariiqda ugu horeysay in ka dhigi cryptocurrency iyo technology blockchain laga heli karaa sida maal-goynta-qarkiisa ah Australian kasta. "
Sida laga soo xigtay Surman, halka dad badan oo Australiyaana ayaa dooneysa inay maalgashi ku cryptocurrencies, la'aanta ah ee farsamo ogaada-sidee baa ka hortagga ugu iyaga ka mid ah ka boodo galay biyihii lacagta digital.
casriga ah Japanese siibtey Rafaa in uu hirgaliyo 7nm Seeraar qode
Shirkadda wayn ee it Japanese siibtey Internet ayaa lagu wadaa inuu hirgaliyo qalab macdanta Seeraar ku salaysan chips 7nm dhamaadka sanadkaan.
Shirkadda ayaa sheegay in ay soo bandhigayso qode B2 cusub 6-dii June leh wax soo saarka mass in ay ugu dhaqsaha badan la raaco, iyo shixnadaha laga bilaabo October.
Ku dhawaaqidda ayaa sheegay in qalabka waa in ay bixiyaan-heerar sare oo awood ahato la baahida loo qabo korontada hoose.
Coinbase keensataa crypto Paradex sarrifka & ayaa qorshaynaysa in ay bixiyaan adeegyo Maraykanka ka baxsan
Coinbase, madal ugu weyn sarrifka crypto ee Maraykanka, ayaa helay sarrifka baahsan Paradex madal.
Paradex waa adeeg bixiya isticmaala awood u leh inay ka ganacsan cryptos si toos ah uga boorsada ay halkii la isticmaalayo adeegyada isugu sida Coinbase asaaga-fadeed, Gemini, iwm. Sayidka, dadka isticmaala waxay leeyihiin xuquuq buuxda calaamadihii iyo caasimada Fiat haya.
Coinbase ayaa qorshaynaysa in ay ka dhigi uqaadineed qaar ka mid ah in technology iyo bilowno adeegyada Paradex ee macaamiisha ka baxsan Maraykanka.
Shirkadda tamarta Czech adag tahay in la aqbalo lacagaha Seeraar
Mid ka mid ah shirkadaha gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn ee Czech Republic, Prague gaaska, ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku aqbali Seeraar bisha soo socota.
Shirkadda tamarta waa shirkadda kaliya ee warshadaha in ay qaataan tallaabo noocan oo kale ah.
Waqtigan xaadirka ah, Prague korontada Gas ka badan 420,000 macaamiisha gaaska.
About ICO: Yaa ururiyay lacag badan inta lagu jiro iibka calaamo
Sanadkii la soo dhaafay, IC ...
Bill Gates ayaa sheegay Seeraar waa casriga dhif ah in uu keeno dhimasho hab toos ah
In AMA Reddit a on T ...
Germany oo aan canshuur doonaa Seeraar haddii ay waxaa loo isticmaalaa sida habka lacag bixinta
Germany oo aan canshuur doonaa Bi ...
Post Previous:Blockchain News 23.05.2018